Sary mankany amin'ny Sarintany | Fiaretana haran-dranomasina
Ny sary lavitra mahatsapa dia kisarisary piksel misy sanda isa fa ny sari-tany kosa dia mampiasa ny fandrindrana X sy Y hamaritana ny toerana misy ny teboka, ny tsipika ary ny faritra (polygons) izay mifanitsy amin'ny endri-tsarintany. Ny fanovana ny sary zanabolana ho lasa sari-tany izay manana fahitsiana avo lenta dia dingana iray mitaky manam-pahaizana sy asa eny ifotony.
Avy amin'ny sary zanabolana (havia) mankany amin'ny sarintany misy ny vatohara misy kilasy benthic (ankavanana). Ity sary sy sarintany ity dia mampiseho ny Nosy Heron any Aostralia, haran-dranomasina eo amin'ny faran'ny atsimo amin'ny Great Barrier Reef. Sary © Allen Coral Atlas
Mba hamoronana sarintany amin'ny sary dia ampiharina ny teknika fanasokajiana. Iray amin'ireo fomba fiasa malaza kokoa ny famakafakana sary miorina amin'ny zavatra, teknika fanasokajiana sary vao haingana sy matanjaka.
Fampisarahana sy fanasokajiana sary iray mandritra ny famakafakana mifototra amin'ny zavatra. Sary © GISGeography
Ny famakafakana sary miorina amin'ny zavatra dia mizara voalohany ny sary ho zavatra. Ny fizarana dia mifototra amin'ny sonia spectral an'ny pixel, ny endrika sy ny haben'ny zavatra, na ny firafitry ny piksel ao anatin'ilay zavatra. Vantany vao mizarazara ny sary dia ampifanarahan'ny mpampiasa amin'ny sokajy vitsivitsy ny saron'ny rakotra tany tsirairay. Voakilasy ilay sary avy eo.
Skema fananganana kilasy
Ny tetika fanasokajiana dia ampiasaina hanomezana kilasy ho an'ny zavatra iray amin'ny sary. Ho an'ny haran-dranomasina, ny fahalalana mialoha ny faritra dia hanampy hamantatra ireo kilasy mety hatao saritany. Ireo kilasy ireo dia ampiasaina hananganana tetik'asa fanasokajiana izay ampiasaina hananganana fanadihadiana marina sy faritra kendrena ho an'ny fanofanana data.
Ity ambany ity dia ohatra iray amin'ny fanasokajiana ambaratongam-pahefana ampiasaina amin'ny sari-tany ao amin'ny Allen Coral Atlas izay misy ny sokajy geomorphic sy benthic ary ampy amin'ny ankapobeny ampiasaina amin'ny sehatra manerantany.
Ohatra amin'ny drafitra fanasokajiana Allen Coral Atlas ho an'ny atol. Loharano: Kennedy et al. 2020
Fanadihadiana eny an-tsaha
Snorkeler mamita ny fanadihadiana eny an-tsaha. Sary © Emma Kennedy, University of Queensland
Ny angona an-tsaha dia singa iray lehibe amin'ny famoronana sarintany misy kalitao avo lenta. Ny angon-drakitra an-tsaha dia manangana rohy eo anelanelan'ny sary sy ireo fiasa an-tsarintany.
Tanjona amin'ny fanadihadiana:
Fantaro ireo kilasy fonenana hapetraka amin'ny sarintany ary mamorona drafitra fanasokajiana
Mitadiava faritra misy solontena isaky ny kilasy onenana mba hanangonana tahirin-kevitra momba ny fiofanana
Miteraha angona ilaina amin'ny fanitsiana sary, toy ny mazava sy ny halalin'ny rano
Angony ny teboka misintona kely mba hahitana ny marim-pototra ny sokajy (vinavina vs. kilasy voamarina)
Misy fomba isan-karazany azo ampiasaina hanangonana angon-drakitra marimaritra iraisana ho an'ny fanamarinana fanasokajiana ankoatry ny fanadihadiana SCUBA sy snorkel. Ny angona dia azo angonina amin'ny alàlan'ny fiaramanidina sy fiaramanidina ambony, fitaovana anaty rano toy ny fiara lavitra (ROV), ny fizahana toerana avy any anaty sambo amin'ny alàlan'ny mpijery ambany fitaratra, na koa ny fahalalana eo an-toerana.
Ny mpisitrika dia manangona sonia mari-pahaizana spectral ho an'ny karazana ambany tsirairay. Sary © Kovacs, University of Queensland
Data momba ny fiofanana
Ny angon-drakitry ny fiofanana dia karazana data angon-drakitra voaangona mihoatra ny fanasokajiana sary. Izy ireo dia santionany "an-tany voatonona" isaky ny kilasy ao anatin'ny drafitra fanasokajiana. Nampiasaina izy ireo mba "hampiofana" ny algorithm fanasokajiana hahafantarana ireo lamina miavaka momba ny refin'ny spectral isaky ny kilasy. Ireo dia azo angonina amin'ny fomba maro toy ny SCUBA sy ny fanadihadiana anaty snorkel, ny drone aerial sy ny habakabaka, ny fiara lavitra (ROV), ny sambo, na ny fahalalana eo an-toerana aza.
Fanombanana ny fahamarinan-toerana
Ny fanombanana ny marina dia ampahany lehibe amin'ny tetikasa fanasokajiana rehetra ary manome refy ny maha-marina ny vokatra sarintany. Mampiasa tahirin-kevitra mahaleo tena "referensement ground" izy hikajiana ny isa marina mifototra amin'ny statistika mifototra amin'ny fampitahana ireo kilasy kilasy voamarina (an-tsarintany) kilasy voatanisa ao amin'ilay andininy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny pixel kilasy na zavatra voasokajy dia ampitahaina amin'ny zava-misy, na izay tena misy eo amin'io toerana io. Na dia mandany fotoana sy lafo aza ny fanangonana angon-drakitra mahaleo tena, ireo data ireo dia azo alaina ihany koa amin'ny fandikana sary misy vahaolana avo lenta, sary an-tsary efa misy, na manam-pahaizana eo an-toerana.